Xikmada ku jirta kala soocidda Caado iyo Dhaqan
Xilli walba waxay bani aadamka ku qasban yihiin in ay isdul taagaan dhibaatooyinka nolosha kala soo darsa iyagoo isku dayaya sidii ay dhibaatooyinkaasi xal ugu heli lahaayeenn, tiiyoo ujeedada kadambeysa raadinta xalkaasi yahay, tiigsashada badhaadhaha ay bulshadaasi ku naalooneyso. Dhaqanka iyo caadadu waxey doorweyn ka ciyaaraan gabi ahaanba hab nololeedka bulshooyinka aadanaha. Sidaa darteed hadii lagu guuleysto kala shaandheynta labadan erey “Dhaqan Iyo Caado”, oo aan isleeyahay baraaruga noocan ahi bulshada Soomaaliyeed maanta wey u baahan tahay si ugu yaraan meesha la’inaga haysto aynu u garan laheyn, taas oo fure u ah kabixitaanka dhibta dabada dheeraatay ee bulshada Soomaalieed ku gedaaman. Hadaba qoraalkan kooban waxaan kusoo bandhigi doonaa kala duwanaashaha labada erey ee “Dhaqan iyo Caado”, sida ay u kala duwan yihiin, micnaha ay xambaarsan yihiin iyo sida bulshada Soomaaliyeed adeegsigooda ay isugu qasaan inta nadan.
Ereyga caado wuxuu cabirayaa wax mar inta ay bilowdeen dadkuna caadeysteen yuusanba wanaagsanaanine. Tusaale ahaan ereyga “Nasab Dhiman” oo micneheedu yahay hebel waa Midgaan, Tumaal, Gabooye iyo Yaxar dhamaantood waa caado bulshada Soomaalieed da’ba da’da ay ka dambeysay ka dhaxashay. Iyadoo aynu wada ognahay saamenta foosha xun ay ku leedahay ruuxa Soomaaliga ah ee bulshadu ugu yeedho weedhahaasi, hadana bulshada Soomaaliyeed wey caadeysteen, in ay katagaana wax sahlan agtooda kama aha. Hadaba hadii aynu eegno dhanka luqadaha ajnabiga sida midda ingiriiska; ereyga Caado wuxuu ku yahay “Tradition” asalkiisu waxa uu kasoo jeedaa Latin “Traditio” oo micneheedu yahay, “To betray to deceive to surrender”. Hadaba ruuxa Caado raaca ah, waa ruux khiyaamay mustaqbalka nolashiisa, halkii uu buuga noloshiisa waagii baryaba baal cusub ka furi lahaa ayuu baal qudha ku celceliyaa, mustaqbal lasheegaana ma jiro markaa, kol hadii wixii tagay la’iso dhiibo, jiilba jiilka ka dambeeyana waxey ku gowracan yihiin wixii kuwii ka horeeyay wakhtigu ku seegay in ay meeshaas kasii wadaan.
Balse ereyga Dhaqan ingiriis ahaan waa “Culture” wuxuu ka yimid ereyga “Cult” oo lamid ah “To cultivate, which corresponds virtue, goodness and integrity of peasant life”. Waxwalba oo fiican hadii ay sifo kuu noqoto waxey kamid noqotaa dhaqankaaga, ruuxuna wuu ku faani karaa, sida; runta, cadaalada, deeqsinimada iyo marti galinta IWM. Micnaha af Soomaali ahaanna kaa ayuu ku dhowyahay, oo wuxuu ku yahay, “Dhaqan” oo lamid ah hufnaan, nadaafad ama ceeb ka saliim “To be clean, fresh and unblemished”. Waxaan xusuustay ujeedada ka dambeysa magaca “Dhaqane” in loola jeedo “Qof xumaan ka nadiif ah” oo hadii aanu sidaa aheyn, maxaa loo arki waayay ruux labaxa magaca “Caado”?. Yacnii farqiga u dhexeeya waa mid muuqan kara markii nolosheena lagu dabbaqo labadan erey ee “Caado iyo Dhaqan”.
Hadii aan si kale doodan u yarehe caddeeyo, “Caado iyo Dhaqan” isgoys ay ku kulmaani ma jiro, balse halka Caadadu ku dhamaato ayuu dhaqanku kabilowdaa. Hadii taxliilka Ibnu Rushdie ee labadan qodob lagu qanco, wuxuu dhalinkaraa in lagu baraarugo khatarta caadadu ku hayso qiyamka insaanka/dhaqanka.
Hadaba muxuu ka aaminsan yahay Ibnu Rushdi “Dhaqanka iyo Caadada”?
Kitaabkiisa layidhahdo “Fasl al-Maqaal” wuxuu ku leeyahay Ibnu Rushdi, Taqliidku “Waxa qoorta laguu sudho” waxey fasahaadisaa Fidrada/Dhaqanka, maxaa yeelay Ibnu Rushdi ma aanu aaminsana in, fidrada/dhaqanka labadeli karo (Laatabdiila likhalqi laahi), balse in taqliidku/caadadu wasakheyso fidrada/dhaqanka.
Luqada Carabiga Caado waxay ku noqotaa Taqliid oo micno ahaan ku ah, wax qoorta laguu sudho, lagugu astaansado, waa adigoo lagu yidhaahdo waxaas baad tahay, walow aadan dooranin, lagana yaabo in aanad dooneynin, hadana laguu tuso inaad ku khasban tahay. Sidaadarteed rasuulku (SCW) wuxuu yidhi waxaa la’iisoo diray dhameystirka makaarimil akhlaaq/dhaqanka wanaagsan, islamarkaana dadka luquntooda laga furfuro silsiladaha taqliidka/caadada.
Hadaba waa maxay Caado?
Marmar wey dhacdaa, qofku isagoo ujeeda inuu yidhaahdo, caado xumo, inuu dhaqan xumo yidhaahdo, balse waa adigoo dhanka kale yidhaahda, “Wanaag xun” ama “Xumaan fiican”, dhaqanku ma xumaan karo, sida aaney caadadu u fiicnaan Karin. Sidan ayaana loo kala sooci karaa;
Ixtiraamka Xaqirista=(Midgaan, Tumaal iwm)
Naxariista Utunta Cadaawada
Qalbi wanaaga Ciil kama koranimada
Midnimada Qabiilka/qabyaalada soocan
Marti galinta Marti heyb ku dhibaateynta
Xishoodka Sariig la’aanta
Xalaal quudashada Xaaraan cunista
Alla kacabsiga Aakhiro moognimada
Caqliga wanaagsan Caadifada sumeysan
Damaca wanaagsan Damac xumada
Akhristow maxaad ku fasirikartaa markii Cumar BInu Khadaab uu kawaramayay caadadii soo jireenka aheyd ee uu awowyadii ka dhaxlay, kuna saabsaneyd gabdhaha oo lanolol xabaalo,,,? Eeg taasi caado Carbeed oo xitaa Qur’aanku si ba’an u weeraray bey aheyd!. Midda kale Caado cusub oo dhanka siyaasadda Soomaalida baryahan kusoo biirtay bal iyana is dultaaga. Maxaad ku tilmaami kartaa “Point five” ka “Others” Soomaalidu (Afarta kale) ku sunteen dad walaaladood ah oo Soomaali ah, waxaan kawadaa “4.5” dhanka awood qeybsiga laxidhiidha.
Caado waa wax dadku joogteystaan, iska dhaxlaan, isku kala soocaan, isku dulleystaan oo ay kukala sad bursdaan. Tusaale ahaan markii Qu’aanku dhaleeceynta usoo jeediyay qolyihiin caadooyinka aabayaashood ay kasoo gaadheen ku dhegenaa, oo markii lagu yidhi waxan aad caadeysteeni muxuu yahay? Waxey ku jawaabeen “Innaa wajadnaa caleyhi aabaa’anaa, awalow kaana aabaa’uhum laa yacqiluuna shey’an walaa yahtaduun”, bal kawaran buu Ilaahay Yidhi; hadii aabayaashu aaney caqli/intuition iyo hadyi/reflection midna aaney wadan.
Qore Nuradiin Askar Ibraahim nuradiin_as@yahoo.co.uk